कस्तो खाना पोषणयुक्त ? हेर्नुस् डा. उमा कोइरालाका ६ टिप्स – Nepali Health
कस्तो खाना पोषणयुक्त ? हेर्नुस् डा. उमा कोइरालाका ६ टिप्स
२०७४ असार २ गते ८:३० मा प्रकाशित
प्रा. डा. उमा कोइराला, पोषणविद्
-हामी नेपालीहरु चिल्लो पिरो अमिलो र बोसोयुक्त खानेकुरा बढी मन पराउछौँ । तर तिनीहरुको मात्रा नमिलाई खाँदा शरीरलाई हानी हुन्छ ।यस्ता खानेकुरा सँगसँगै हरियो सागपात र ताजाफलफूल पनि सन्तुलितरुपमा खानुपर्छ । बढी चिल्लो अमिलो र पिरो खानेकुरा नखाँदा नै राम्रो हुन्छ । आफूले पचाउन सक्ने अवस्था हेरेर मात्र यस्तो परिकार खानुपर्छ ।
अत्यधिक गर्मीसंगै नाकबाट रगत बग्ने समस्या बढी देखियो
इजिप्टमा गएर एमबीबीएस अध्ययन गर्न आंशिक छात्रबृत्ति